राज्यको लगानी खेर जाँदै | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / सम्पादकीय / राज्यको लगानी खेर जाँदै
राज्यको लगानी खेर जाँदै
Posted by: युगबोध in सम्पादकीय August 9, 2018	0 135 Views
दाङमा ने पाल संस्कृत विश्वविद्यालय स् थापना भएपछि अहिले सम्म भएको सबै भन्दा महत्वपूर्ण काम आयुवेर् द चिकित्सकहरुको उत्पादन अर्थात विएएमएसको पढाइ हो भन्ने कुरा निसंको च भन्न सकिन्छ । दाङमै आयुवेर् द डाक्टरहरुको उत्पादन हुने भएपछि यसको महत्व र गरिमा अझ बढ्ने आशा गरिएको थियो  । तर अपे क्षा गरिए अनुरुप प्रतिफल प्राप्त हुन सके को छै न । आयुवेर् द उपचार पद्धतिको महत्व र यसको प्रभावकारिताबारे सर्वसाधारणलाई बुझाउन नसक्दा नै बे लझुण्डीमा रहे को आयुवेर् द शिक्षण अस् पताल सुनसान बन्न पुगे को हो  ।
आयुवेर् द शिक्षण अस् पताल रहे को भव्य भवनमा पाँच नं. प्रदे शको मुख्यालय राख्ने यसअघिको तयारी थियो  । तर प्रदे शको अस् थायी राजधानी बुटवल तो किएपछि सो ही भवनमा आयुवेर् द शिक्षण अस् पताल सञ्चालनमा आएको छ । जुन उद्दे श्य र लक्षका साथ झण्डै २४ करो डको लगानीमा भव्य र आकर्षक भवन बने को छ, त्यसै अनुरुप जनताले से वा पाउने गरी यो जना बनाउने काममा संवद्ध पक्षले ध्यान दिनुपर्छ ।
विगत लामो समयदे खि ने संवि राजनीतिक अखाडा बन्दै आएको छ । कर्मचारी र प्राध्यापकहरु नै आन्दो लनमा उत्रने र तालाबन्दी गनेर् गै र व्यावसायिक एवं गै र प्राज्ञिक क्रियाकलाप नै यो संस् था गतिहीन बन्नुको एउटा प्रमुख कारण हो  । यस् ता विकृतिहरु अब कम्तिमा अन्त्य हुनुपर्छ । आयुवेर् दसम्बन्धी चे तना जगाउने र जागरण फै लाउने काममा ने संवि लाग्नुपर्छ । उसले आफ्ना अंगहरुलाई सो हीअनुरुप परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । तालाबन्दी गरे र तलब खाइरहने विकृति अन्त्य गरे र काम नगर्दा तलब खान नपाउने गरी ऐ न बनाउनुपर्छ । यसरी ने संवि अगाडि बढ्न सक्यो भने ने संविको एउटा महत्वपूर्ण अंग आयुवेर् दको महत्ता बढ्न सक्ने छ । ने संवि आफै द्वन्द्व र विवादको भुमरीमा रुमल्लिरहँदा यसको नकारात्मक प्रभाव यसका अंगहरुमा पनेर् नै भयो  ।
अहिले आयुवेर् दको महत्व संसारभर बढ्दै गइरहे को छ । दाङमा पनि यससम्बन्धी चे तना बढ्दै छ । यस् तो अवस् थामा दाङमा रहे को आयुवेर् द शिक्षण अस् पतालमा दै निक एकजना विरामी नआउनु ठूलो बिडम्बना हो  । यस् तो स् िथतिमा विएएमएसको पढाइ हुँदै गर्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने आशा गर्न सकिन्न । विरामी नै नहुँदा शिक्षणसमे त प्रभावित हुने अवस् था आउँछ भने त्यो भन्दा लाजमदोर् कुरा के हुन सक्ला ? यसले विद्यार्थीहरुको प्रयो गात्मक सिकाइ स् वतः कमजो र बन्न पुग्छ । प्रचारप्रसारको कमीका कारण यस् तो अवस् था आएको हो भने यसमा संवद्ध पक्षको ध्यान जानुपर्छ र सबै सरो कारवालाहरुले सघाउनुपर्छ । एलो पे थिक र आयुवेर् दिक दुबै लाई समन्वयात्मकरुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । अहिले एलो पे थिक उपचार से वा पु¥याइरहे का सरकारी अस् पतालहरुमा आयुवेर् दिक चिकित्सकको दरबन्दी राखे र से वा प्रवाह गनेर् काम भइरहे को हुँदा संकीर्णता पाले र बस् नु हुँदै न ।
आयुवेर् द उपचार पद्धति चिकित्सा विज्ञानको जननी हो  । एलो पे थिकलगायतका अन्य उपचार पद्धतिको विकास भएको धे रै वर्ष भएको छै न । हाम्रै खे तपाखा, वन पहाडमा रहे का अमूल्य जडीबुटीहरुको महत्व बुझाउन सकियो भने आयु्वेर् दको लो कप्रियता थप बढ्ने छ । मानव सभ्यताको विकासको प्रारम्भिक चरणमै आयुवेर् दबाट बिरामीको उपचार गनेर् पद्धतिको शुरुवात भएको थियो  । तत्कालीन ऋषिमुनिहरुले यसको गहन अध्ययन गरे का थिए, जसमा धन्वन्तरीको नाम अग्रपङ्तिमा आउँछ । अहिले चरम उपभो क्तावादी चिन्तनको विकाससँगै मानिसहरुले आयुवेर् दलाई भुल्न थाले का छन् । यो बे ला आयुवेर् दको महत्व र उपयो गिता बढाउनका लागि संवद्ध क्षे त्रबाट चे तना र जागरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।
बे लझुण्डीमा रहे को आयुवेर् द शिक्षण अस् पतालमा विभिन्न विधाका विशे षज्ञ चिकित्सकहरु कार्यरत रहे पनि एक वर्षमा एक सय ८२ जना बिरामीमात्र उपचारका लागि आउनुका पछाडि के –के कारण छन्, त्यसलाई पत्ता लगाएर तत्काल सुधार गनेर् कामको थालनी गर्नुपर्छ । राज्यले आयुवेर् दको पठनपाठन र नागरिकलाई चिकित्सा से वा उपलब्ध गराउन भौ तिक पूर्वाधार निर्माण र अन्य विविध क्षे त्रमा ठूलो धनराशी खर्च गरे पनि त्यसअनुरुप प्रतिफल प्राप्त हुन नसके को प्रष्ट छ ।
Previous: हादैर् आएको नेपालको अब जित्ने पालो
Next: उपकरणसँग जोडिदै गाउँनगर